NYOCHAA EDEREDE NA-ARỤ ỌRỤ N'ỊNTANETỊ - ỌRỤ NTANETỊ - 2019
N'asụsụ Russian (ọ bụghị naanị n'ime ya), okwu nke okwu nwere ike ịdabere na nrụgide kwesịrị ekwesị, ya mere, n'ọnọdụ ụfọdụ ọ dị mkpa ịmata nkwupụta ya. N'ụzọ dị mwute, na ọtụtụ ederede editọ maka PC, a naghị enye ọrụ nlekọta nchegbu, maọbụ ọ siri ike ịchọta ma jiri ya. Na nke a, ọrụ ntanetị ga-abụ ezigbo ihe analogues.
Atụmatụ nke ọrụ ịntanetị
Maka ọtụtụ akụkụ, ọrụ ule nrụgide nwere onwe ma na-arụ ọrụ ngwa ngwa. Naanị ịkwesịrị ịtinye ederede, ma eleghị anya, tinye ntọala dị iche, wee pịa "Lelee". A ga-eme ka nsogbu okwu niile pụta ìhè na-akpaghị aka. Ọ bụrụ na enwere nsogbu njehie na okwu, a ga-eme ka ọ pụta ìhè, na mgbe ụfọdụ, ha ga-atụ aro nhọrọ nhazi.
Usoro 1: Morfer
Ebe nrụọrụ ahụ na-enye gị ohere ịhazi ederede dị mkpa maka n'efu. N'ọhịa maka ule, enweelarị ịtinye akụkụ nke ọrụ ahụ dịka ihe atụ ị nwere ike ịlele ọrụ nke ọrụ ahụ. Enweghị nhọrọ ndị ọzọ iji rụọ ọrụ na ederede na Morfer.
Gaa na Morfer
Ntuziaka maka iji saịtị ahụ yiri nke a:
Na ịpị na njikọ dị n'elu, a ga-akpọrọ gị gaa na saịtị na otu ubi maka ịtinye ederede na bọtịnụ ego. Maka nnwale ahụ, ịnwere ike ịlele ederede ahụ na ndabara site na iji bọtịnụ ahụ "Tọọ nkatọ"dị na ala aka ekpe nke ihuenyo.
Site nyochaa na paragraf mbụ, lelee ederede gị. Naanị ihichapụ onye ahụ ịtinye n'ọhịa dị ka ihe atụ, detuo ma kpochapụta nke gị, wee pịa bọtịnụ maka ịtọ ụda.
Usoro 2: Accentonline
Ọrụ a dị ka nnukwu akwụkwọ ọkọwa okwu n'ịntanetị karịa ebe saịtị nyochaa ederede zuru ezu. Ọ dị nnọọ mfe ịlele okwu ọ bụla ebe a, ebe ọ bụ na a na-atụnye nkọwa dị iche iche mgbe ụfọdụ na ha. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịma ebe kwesịrị ekwesị na ederede buru ibu, akwadoro ka ị jiri ọrụ ahụ a tụlere n'elu.
Gaa na Accentoline
Ntuziaka dị na nke a bụ nnọọ mfe:
Mpaghara nyocha ahụ dị n'akụkụ aka ekpe nke ihuenyo ahụ. Tinye okwu ọ bụla n'ime ya wee pịa "Chọta".
Nke a ga-emepe otu ebe a ga-egosipụta nrụgide zuru oke, obere okwu na ule nyocha nke onwe gị. Nke a bụ okwu na-enweghị usoro ị chọrọ ịhọrọ nhọrọ nnyefe ziri ezi maka nrụgide. Inye ule bụ nhọrọ. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ịhụ ihe ndị ọrụ ndị ọzọ na-ekwu maka okwu a na-enyocha. Ihe ngwugwu na okwu dị na ala nke ibe.
Usoro 3: Udarenie
N'ime usoro ya na ọrụ ya, ọrụ ahụ yiri ọrụ ahụ site na usoro nke abụọ - i tinye otu okwu ma gosi gị ebe nrụgide ya. Nanị ihe dị iche n'ebe a bụ na interface - ọ bụ ntakịrị ihe dị mfe, ebe ọ bụ na ewepụla ihe ọ bụla zuru oke na ya.
Buru nkenke banyere otu esi elele nchegbu na saịtị a:
Na peeji nke mbụ, tinye okwu ị nwere mmasị na nnukwu igbe ọchụchọ dị n'elu nke saịtị ahụ. Pịa na "Chọọ".
Odi akwukwo ogugu na-egosiputa okwu yiri nke a. Ọ bụrụ na ị nwere ikpe a, wee pịa okwu mmasị site na listi izugbe.
Nyochaa ule nchoputa ma guo okwu di nkenke. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, ị nwere ike ịjụ ha na ihe ndị dị na saịtị ahụ.
Hụkwa: Otu esi elele edemede okwu na ntanetị
Ọ dị mfe ịlele otu okwu maka nnyefe ziri ezi, ma ọ bụrụ na ị nwere ederede ọkụ, ọ ga-esiri gị ike ịchọta ọrụ nke na-arụ ọrụ nlele.